Iyo Yakanakisa Yemukati Pfungwa dzeYouTube Yemitambo Chiteshi Kukura - GoViral
musha » Iyo Yakanakisa Yemukati Pfungwa dzeYouTube Yemitambo Channel Kukura
Kana uchangotanga chiteshi chemitambo paYouTube, unogona kunge uchinetseka kuti ungakura sei chiteshi. Nepo paine maturusi aunogona kushandisa kuwana emahara maYouTube maonero, zvaunoda, uye vanyoreri, iwe unofanirwa kutarisa zvakanyanya kukura chiteshi chako nenzira yakasikwa. Mune ino posvo, isu tinokutora iwe kuburikidza nemamwe emukati mazano iwe aunogona kutora kune-refu-nguva kubudirira kweako mutambo wemitambo. Saka, ngatitangei!
1. Ongorora mitambo yese yaunotamba
Vanhu vanogara vakatarisa kuongororwa kwemitambo, sezvo vachiwanzo kumisikidza zvisarudzo zvavo zvekutenga pamitambo yakanaka kana yakaipa. Nepo paine atove akati wandei emitambo chiteshi paYouTube ayo anoita ongororo yemitambo, pamwe hazvizombononoka kuti iwe utange kuongorora mitambo yese yaunotamba. Semuenzaniso, inozivikanwa mutambo wemitambo Gameranx inopa yayo yekutora pamitambo ongororo kuburikidza nhevedzano inonzi 'Usati Watenga'. Icho hunyengeri kuita kuti wongororo ive yakasarudzika uye kwete kuteedzera mamwe maYouTubers 'ekuongorora masitayera.
2. Gadzira matipi uye manomano mavhidhiyo
Kana iwe wapedza mutambo, kugadzira matipi uye manomano vhidhiyo inogadzirira zano rakakura. Aya mavhidhiyo akanaka kune vanotanga avo vari kungotanga pane avo akasiyana emitambo nzendo. Zvekare, iwe unofanirwa kuve wakasarudzika neako mharidzo yemavhidhiyo aya, sezvo pagara patove nemikana yakawanda inogadzira matipi uye ekunyengera mavhidhiyo.
3. Ita zvekutamba
Playthroughs ingangodaro iri pakati pemavhidhiyo akaomesesa emitambo aunogona kugadzira. Dzinotyisa nguva-dzinodya, uye kana mutambo urikutamba wakaomarara uye wakareba, ungatofanira kukunda akawanda mu-mutambo kufa kuti uupedze. Nekudaro, maererano nemaonero paYouTube, mavhidhiyo ekutamba ane mubairo. Nekudaro, kana iwe uine iyo nguva uye hunyanzvi hwekubheja hunyanzvi, hapana chikonzero nei iwe usingafanire kufunga nezvekugadzira yekutamba mavhidhiyo.
4. Shandisa YouTube Live
YeYouTube yekupararira kwehupenyu chinhu chinokutendera kuti ubatanidze nevateereri vako mune chaiyo-nguva. Iyi inzira yakanaka yekuti uratidze hunyanzvi hwako hwekutamba uye nekuita nevateereri. Iwe unogona zvakare kushandisa mhenyu chat chinhu kukoka vatariri kuti vakubvunze mibvunzo. Mukufamba kwenguva, kuita wenguva dzose mavhidhiyo kunovaka hukama hwepamoyo pakati pako nevateereri vako.
5. Ipa nhau dzemitambo kuenda
Iwe haufanire kunge uri nyanzvi mutapi venhau kuti upe nhau. Chero bedzi iwe uchipa yazvino nhau dzemitambo kune vateereri vako nezwi rako rega rakasarudzika, rinofanira kushanda. Kuti ugadzire emhando yepamusoro mavhidhiyo enhau emitambo, uchafanirwa kuteedzera mashoma makuru enhau emitambo. Iwe unogona kugadzira vhiki nevhiki kana pamwedzi zvemitambo nhau mavhidhiyo ayo ane ruzivo rwechizvino-zvino pamusoro pemitambo iri kuuya uye zvemitambo zvemitambo.
6. Gadzira mavhidhiyo enhau
Izvi zvakaoma, asi zvakakodzera kuedza kana iwe uine pfungwa yakanaka yekuseka. Yese mitambo ine glitches, uye kana iwe uchikwanisa kunyora zvese zvinokanganisa uye nekuita mavhidhiyo kubva kune iwo ese, zvinogona kuve zvinonakidza. Semuenzaniso, Videogamedunkey chiteshi chakakurumbira chemitambo paYouTube chinosanganisa critique nekomedhi.
7. Shandira pamwe
PaYouTube, kubatana kunogona kushanda zvishamiso. Saka, nguva nenguva, swedera kune mamwe maYouTubers emitambo kuti uite mavhidhiyo ekubatana. Kubatana nevamwe maTubers kunobatsira iwe kunze maererano nekuratidzwa kune vatsva vateereri.
8. Enda kupfuura YouTube
Basa rako kunze kweYouTube rine basa zvakare. Semuenzaniso, iwe unogona kuve nemitambo blog kune vateereri vanofarira kuverenga. Zvese zvaunoda kuti uite mune ino kesi ndeye kubatanidza kudzokera kune yako YouTube chiteshi pane iyo blog. Iwe unogona zvakare kuyedza mapuratifomu seTwitch, ayo ave nzvimbo dzakabudirira dzevatambi kuvaka vateereri vatsva.
Kana kukura chiteshi chako cheYouTube pakutanga uchinzwa kuchinetsa pakutanga, usakanda mapfumo pasi. GoViral chishandiso kuburikidza nacho iwe chaunogona kuwana mahara maonero, vanyoreri, vanofarira, uye makomendi ekutanga kick yako YouTube yekutamba basa.
Iyo Yakanakisa Yemukati Pfungwa dzeYouTube Yemitambo Channel Kukura neGoViral Chikwata Chekunyora, 16 September 2021